Top 5 Talooyin in ay dardar macruufka 9/8, Waxaad samaysataa iPhone Run si dhakhso ah
"My iPhone waxaa socda iyo aad u badan si tartiib ah ka dib markii macruufka 9 update. Ma jiraa hab si ay u dardar? Waxa aanu ka jawaabin sida ugu dhaqsaha badan ka hor. Waa arrin xanuun badan in ay u isticmaalaan."
macruufka 9 waa nidaamka coolest fulinada iPhone hadda. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo dadka qaarkood ay ku raaxaystaan ​​oo dhan qaababka cusub macruufka 9 farxad ku keenaa, dadka qaarkood waxay dareemaan xanuun badan loo isticmaalo. Qaar ka mid ah qalabka ka weyn, sida iPhone 4s, iPod taaban jiilka 5aad, iPad 2, iPad bandhigay isha si tartiib ah ayaa noqon doona ka dib markii lagu casriyeeyo si macruufka 9 Oo waxa ka xun, ka dib markii lagu casriyeeyo qalab macruufka in macruufka 9, aad looma oggola in ay hoos ka macruufka 9 ilaa macruufka 8 ama hore. Aan wajihi xaqiiqda ah. Nasiib wanaag, weli waxaa ku qoran talooyin dardar macruufka ah 9/8 on your iPhone, iPad ama iPod taabto. In socda, waxaan soo qaadan doonaa iPhone sida tusaale in uu ku tuso sida loo dardar iPhone la macruufka 9/8.
Sida loo dardar iPhone socda ee macruufka 9/8
1. Delete barnaamijyadooda la isticmaalin on iPhone
Aan uga takhalusi lahaayeen barnaamijyadooda la isticmaalin ka iPhone. Tubada on app ah oo ku saabsan screen iPhone Home. Waxaa ku hay ilaa dhan barnaamijyadooda bilaabaan inay u oynayo. Ka dibna riix X bidixdiisa sare ee app kasta oo aan la rabin inaad ka saartid ka iPhone. Haddii aad qabtid wax dhibaato ah in ay tirtirto app ah, dhihi ma aad arki kartaa 'X', fadlan hubi dhib halkan >>
2. files junk Clear
Files qashinka ah, sida faylasha log, Lugood khasnado syncing, download files meel gaarka, app khasnado, sawir / video khasnado, app cookies, iyo app files meel gaarka waxaa ka buuxa aad iPhone inta aad isticmaalkiisa. Si aad u dardar macruufka ah 9/8 on your iPhone, isku day ah '1-Guji Nadiifinta' feature in Wondershare SafeEraser version Windows ama Wondershare SafeEraser u Mac . Waa in lagu soo bandhigo oo dhan files junk oo ha idin ​​iyaga gebi ahaanba ka iPhone saarto awoodo. Download Wondershare version SafeEraser Windows ama Wondershare SafeEraser u Mac in ay leeyihiin isku day!
3. Gebi saarto faylasha loo baahneyn ka iPhone
Gebi saarto fariimaha aan la rabin qoraalka iyo lifaaqyada fariin qoraal ah, sawiro, qoraalo, Safari khasnado, taariikhda Safari, cookies, khasnado keyboard, iyo in ka badan ka iPhone. Waxaad ogaan files kuwaas mashquulin meel aad u badan. Si aad iyaga si joogto ah tirtirayaa, isku day muujinta "masixi Private Data" in Wondershare SafeEraser. Wixii faahfaahin dheeraad ah ee sida loo isticmaalo software, fadlan hubi hagaha u Wondershare SafeEraser .
4. End multi-hawleed ku iPhone
Haddii aadan isticmaali app ama adeeg hadda, waxaad u baahan tahay in la joojiyo hawsha. Multi-hawsha aad iPhone u dhigi doono marka aad isku daydo in ay isticmaalaan app ah. Tubada button Home labo jeer oo isku xigta. Dadban ilaa thumbnail ah.
5. saamayn mooshin Disable iyo hufnaan
Si aad u dami mooshin, Settings tuubada> General> Helitaanka> yaree Codsiga iyo dhigay yaree Codsiga ON.
Kor ku soo sheegnay waa top 5 talooyin aan is dhihi karo inay dardar macruufka 9/8, samaynta orod iPhone aad si dhakhso ah. Haddii aad hayso wax soo jeedin ah, fadlan ii soo sheeg by tagay comment on this page. Waxaan sii wadi doonaa in lagu casriyeeyo maqaalka. Thanks!
Apple ee macruufka 9 vs macruufka 8
> Resource > macruufka > dardar macruufka 9/8, Waxaad samaysataa iPhone Run si dhakhso ah